DEGDEG: Hawlgallo Balaaran oo ka soconaya Gudaha Degmada Baardheere kadib Dilkii Cabdulaahi Eelaay ee Xalay halkaasi ka dhacay. – Gedo Times
DEGDEG: Hawlgallo Balaaran oo ka soconaya Gudaha Degmada Baardheere kadib Dilkii Cabdulaahi Eelaay ee Xalay halkaasi ka dhacay.
3rd April 2016 admin Wararka Maanta 0
Hawlgallo aad u balaaran ayaa saaka ka soconaya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, kuwaas oo lagu baadi goobaayo cidii dishay allaha u naxariistee Marxuum Cabdulaahi eelaay oo kamid ahaa saraakiisha Maamulka Degmadaasi oo Xalay lagu dilay Gudaha Degmada Baardheere.
Cabdulaahi eelaay o oay dileen dableey afka soo duubatay ayaan la ogeyn cida dishay, iyadoo ay goobta ka abxsaden Kooxihii falka dilka ah u geystay.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Degmada ayaa Gedo Times u sheegay in ay ku raadjoogaan kooxihii falkaasi dilka ka dambeeyey ayna cadaaladda horkeeni doonaan, inkastoo aysan jirin cid ilaa iyo hadda gacanta lagu soo dhigay.
dad aad u farabadan ayaa saaka loo taxaabay xabsiga dhexe ee Degmada, kuwaas oo isugu jira qeybaha kala duwan ee Bulshada Mana jirto ahnaaan cad oo dadkaasi lagu kala sari karo marka laga reebo tuhmooyin gooni ah.
Daawo:Masuuliyiinta Baardheere oo sheegay in ay dardar galinayaan Hawgalka ka dhanka ah Al-shabaab.
Toos Baardheere: Qaban-Qaabada Aaska Cabdulaahi Eelaay oo Halkaasi ka socota.